Antenimieran-doholona : Lany ny lalàm-pifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaAntenimieran-doholona : Lany ny lalàm-pifidianana
Lany tsy nasiam-panovana sy tsy nasiam-panitsiana teny anivon’ny antenimieran-doholona omaly ireo lalàna fehizoro hifehy ny fifidianana eto amin’ny firenena. Niisa 54 ireo loholona niatrika ny fandaniana ireo lalàna ireo. Rehefa natao ny tsangan-tanana dia ny 53 no nandany ny lalàna, ary iray kosa no nitsipaka. Nalalaka tanteraka ireo loholon’i Madagasikara nandritra ny adihevitra nialohan’ ny nirosoana tamin’ny tsangan-tanana. Samy naneho ny mahatsara sy ny maharatsy ireo volavolan-dalàna avokoa izy ireo ny tapany maraina, izay nanatanterahina izany adihevitra izany. Taorian’ny fiatoana kely nakana saina anefa dia tapaky ny maro an’isa fa tsy asiam-panitsiana ireto volavolan-dalàna ireto, ka dia izay no nahalany azy. Naneho ny naha raiamandreny eto amin’ny firenena ihany koa ireo loholon’i Madagasika, na ireo mpanohitra, na ireo miara-dia amin’ny fitondrana ankehitriny. Tsy nitrangana savoritaka mantsy teny amin’ny lapa maitso na dia nafana aza ny adihevitra. Izany hoe nanaja ny fenitra demokratika tanteraka, ary naneho firaisankina hatrany ireto loholon’i Madagasikara ireto.
Taorian’ io fandaniana io dia alefa etsy Ambohidahy indray izany ity lalàm-pifidianana ity, hotsirihina hifanaraka amin’ ny lalàm-panorenana na tsia. Aorian’izay dia ny filoham-pirenena no hanao sonia ny lalàna hivoaka ho lalàna manan-kery ahafahana miroso amin’ny fikarakarana ireto fifidianana efa nampanantenain’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa hotanterahina amin’ity taona ity. Tapitra hatreo izany ny adihevitra sy resa-be, fa dia samy hifantoka amin’ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fifidianana ampitoniana avokoa ireo mpanao politika sy ny vahoaka malagasy rehetra. Nifarana hatreo mantsy ny ahiahin’ireo mpanao politika sasany, fa tsy hisy fifidianana amin’ity taona ity. Taorian’ny nahalanian’iny lalana fehizoro hifehy ny fifidianana iny ihany koa dia hiavaka tsara ireo mpanao politika sahy hiatrika vahoaka, sy ireo matahotra ny hiatrika fifidianana amin’ity taona ity.